Meteza Ho Tsy Manaiky Ho Saziana! Hetsika iray Ho An’ny Fahalalahana Manerantanin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2017 9:06 GMT
Satria mihamaro ny firenena misokitra ilay antsoina loatra hoe aterineto manerantany, tsy misy fetrany ho lasa sehatra fanaraha-maso samihafa amin'ny alalan'ny fanivànana, matetika amin'ny fampiasana ny teknolojia nomen'ireo orinasa IT, nanomboka hetsika vaovao, – irrepressible.info, ny Amnesty International mba hanentanana sy hanoherana ny fanitsakitsahana ny zo fototry ny olombelona hanana fahalalahana maneho hevitra.
Efitrano firesahana voatsikilo. Blaogy voafafa. Tranonkala voasakana. Fitaovam-pikarohana voafetra. Olona gadraina noho ny famoahana sy fizarana vaovao fotsiny.
Sisintany iray vaovao amin'ny tolona ho an'ny zon'olombelona ny Aterineto. Mamely ny fahalalahana maneho hevitra ireo fanjakana ampian'ny sasany amin'ireo orinasa IT lehibe indrindra eran-tany.
Misy ohatra manokana ho an'ny sasany amin'ireo firenena sy orinasa banjinin'ny rehetra:
Fitaovana tsara hizaràna hevitra sy ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ny tranonkala. Na izany aza, miha mitombo hatrany ireo ezaka ny hifehezana sy hanaraha-maso ny Aterineto. Voatatitra ny famoretana manjo ny Aterineto any amin'ireo firenena toa an'i Shina, Vietnam, Tonizia, Iràna, Arabia Saodita ary Siria. Enjehina sy gadraina noho ny fitsikerana ny mpitondra azy ireo fotsiny ny olona, amin'ny fitakiana ny demokrasia sy fahalalahan'ny gazety tsaratsara kokoa na noho ny fanabaribariana fanitsakitsahana ny zon'olombelona, an-tserasera.
Fa tsy mikasika ny fanjakana irery ihany ny famoretana ny Aterineto. Nanampy ireo orinasa IT maro tamin'ny fananganana ireo rafitra izay manampy amin'ny fisian'ny fanarahamaso sy ny sivana. Efa nanome ny angona manokana momba ireo mpampiasa imailaka rehetra ho an'ny manampahefana Shinoa ny Yahoo!, nanampy tamin'ny fanamoràna ny tranga fanagadràna tsy ara-dalàna. Samy nanaiky ny fangatahan'ny fanjakana mba hanivana am-pahavitrihana tsara ireo Shinoa mpampiasa ny tolotr'izy ireo ny Microsoft sy Google.
Telo no teboka fototra ananan'ilay fampielezankevitra – voalohany, mandrisika ny olona hanao sonia fanomezantky hisian'ny fahalalahan'ny aterineto, ary faharoa, mankahery ny tsirairay mba hampihena ny sivana amin'ny famoahana sombiny ”tsy azo saziana” amin'ireo fitaovana voasivana any amin'ny tranonkala manokan'ny tena ary fahatelo farany, mba hanao hetsika ho an'i Shi Tao, ilay Shinoa mpanao gazety voafonja.
Raha mikitika ilay boaty ianao dia tonga amin'ilay pejina fampielezankevitra izay, tsy tena mazava loatra, misy ny torohay bebe kokoa mikasika toerana niavian'ilay singa kisendrasendra ary rohy iray mankany amin'ilay tranonkala voasivana (ao amin'ilay boaty fotsy ao amin'ny ankavanan'ilay pejy).
Avy amin'ny angona materialy voasivana ireo singa izay natambatry ny OpenNet Initiative, izay manana ihany koa sarintany afaka ahetsiketsika miaraka amin'ny fanehoana ara-jeografikany fikarohana tamin'ny antsipirihany nataon-dry zareo momba ireo ezaky ny firenena ho fanivanana ny aterineto.
Olona 200 farafahakeliny no nanao sonia ilay fanomezantoky hisian'ny fahalalahan'ny aterineto tamin'ny fotoana nanoratako ity lahatsoratra ity, araka ilay mpanisa ao amin'ny pejy fototry ny irrepressible.info, mitondra ny fitambarany ho sonia eo amin'ny 13.000 eo. Ndao mba hikiaka, sy hanova zavatra.